येही एक फोटो कारण जरिन बनिन ट्रोलको शिकार !! जरिनको कडा जवाफ – Khabar Silo
बलिउड एक्ट्रेस जरिन खानले हालै इन्स्टाग्राममा एउटा तस्बिर सार्वजनिक गरेलगत्तै ट्रोलको शिकार बनिन्। पेटमा के भयो ? पेट हेरेर त उल्टी आउला जस्तो भयो भन्ने प्रतिक्रियाहरु आए। जब जरिनले यस्तो प्रतिक्रियाको उत्तर दिइन्, ट्रोलरहरुको मुख बन्द भयो।
भएको के थियो भने तस्बिरमा उनको पेटमा स्ट्रेचहरु देखिएका थिए। हेर्दा भर्खरै अप्रेशन गरेको दाग पो हो कि झैँ देखिन्थ्यो तर हैन रहेछ। ती दाग त तौल घटाउँदाको परिणाम रहेछ ! उनले प्रतिक्रियामा लेखिन्, ‘यो पेट ५० किलो तौल घटाउनेको हो। यो न कुनै अप्रेसन गरेको दाग हो न अन्य कुनै कुराको !’
उनले आफू नक्कली कुरामा विश्वास नगर्ने भन्दै आफूजस्तो हो त्यस्तै प्रस्तुत गर्न रुचाउने बताएपछि भने उनको साहसको प्रशंसा शुरु भयो। धेरैले उनको बडीको प्रशंसा गर्दै लेख्न थाले, ‘बलिउडमा दमदार रुपमा फर्कन तपाईंले गर्नुभएको मिहिनेतलाई सलाम।’ नकारात्मक सोच भएकालाई तह लगाउने यो हो नि काइदा !
काठमाण्डौ – मंगलबार कुवेती दिनारको भाउ केही पैसाले बढेको छ । अरु सबै विदेशी मुद्राको भाउ भने घटेको छ ।मंगलबार नेपाल राष्ट्रबैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११३ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो । साउदी […]
ट्रम्पको चुनावी सभाहरू यसै महिनाबाट सुरू हुने
Posted on June 11, 2020 Author khabar silo
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सातादेखि राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रुपमा प्रचारप्रसार सुरू गर्ने तयारी गरेका छन्। कोविड–१९ महामारी र एक अश्वेतको मृत्यु भएपछि अमेरिकाभर फैलिएको हिंसात्मक झडपका कारण राष्ट्रपतिका चुनावी कार्यक्रमहरु केही महिनादेखि स्थगित भएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानका व्यवस्थापक ब्राड पास्र्कलले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी चुनावी अभियानका लागि सबै तयारी पूरा […]
एजेन्सी । भारतीय एनसीबीले ला’गू पदार्थको मु’द्दामा धेरै कलाकारहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । शनिबार, एनसीबीले मुम्बईमा हास्य कलाकार भारती सिंह र उनका पतिलाई पक्राउ गरेको छ। उनका पति हर्षलाई सोधपुछ भइरहेको छ। भारतीलाई आज राती एनसीबी कार्यालयमा राखिनेछ र भोलि अदालतमा पेश गरिने बताइएको छ। शनिबार, एनसीबीले मुम्बईमा विभिन्न ३ स्थानमा छा’पा मा’रेको छ […]
तपाईं जन्मेको बार कुन हो ? यी बार जन्मिएकाको हुन्छ प्रेम विवाह